Ogaden News Agency (ONA) – War degdeg ah – Dagaal ka dhacay maanta Ceel- xaar oo lagu jabiyay ciidankii cadawga
War degdeg ah – Dagaal ka dhacay maanta Ceel- xaar oo lagu jabiyay ciidankii cadawga
Ciidamada cadawga ee ka hawlgala deegaanka Baabili ayaa waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 20 May 2012 shir ku qabteen meesha loo yaqaan Ceel -xaar oo Baabili ka tirsan, halkaas oo ay dadka ku ciqaabayeen. CWXO oo ka agdhawaa goobtaas ayaa waxaa soo gaadhay fariin sheegaysa in cadawgu dhib badan uu ku hayo dadka shacab ah ee deegaanka.
CWXO oo looga bartay inay si dagdag ugu hiiliyaan dadka ay u hureen naftooda ayaa markiiba waxay u dhaqaaqeen aaga Ceel-xaar. Waqti yar ka diba waxaa halkii ka bilawday dagaal gacmaha la isula tagay kaas oo cadawgii uu xamili waayay hugunkii rasaasta iyo awooda CWXO ay soo saareen. Mudo yar ka dib ayaa loo awood sheegtay ciidankii cadawga waxayna doorbideen inay kala yaacaan iyagoo iseedaynaa oo midwalba uu kan kale ku leeyahay adaa ii lahaa. Waxaa isqabatay masharaxada iyo sawaxanka gabdhaha Ogaadeenya ee hiilka u ahaa xaq-layaasha ciidanka JWXO.
Dagaalkaas oo dhacay manta oo ay taariikhdu tahay 20 May 2012 ayaa waxaa wararka hordhaca ah ee soo gaadhay ONA ay sheegayaan in cadawga lagaga dilay 30 askari, iyadoo dhaawacuna uu intaa aad uga badan yahay.
CWXO oo si qorshaysan u galay dagaalka ayaa waxa uu halkaa kaga furtay ciidankii cadawga saanad aad iyo aad u badan.
Sidoo kale dagaal xoogan oo ka dhacay 18 May 2012 ceel ka Garigo’an ayaa waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 6 askari, waxaana lagaga dhaawacay tiro kale oo badan.
Dagaalkan ayaa ciidankii cadawga ee galay waxaa la sheegay inuu aad u kala firxaday iyadoo qaybo ka mid ah ay galeen Goomaar iyo Shaygoosh halka qaar kale aan ilaa hada lahayn meel ay ku danbeeyeen.
Ciidanka cadawga ee dagaalkan lala galay ayaa dad ay si gaar ah ula kulmeen waxay u sheegeen inay loo gaystay khasaare balaadhan islamarkaana ay awoodi waayeen inay iska caabiyaan oo waliba ay uga baxaan goobtii dagaalka si qorshaysan.
CWXO ayaa maalmahn kar horleh waxay galiyeen qorshayaasha dagaalka ee ay ku qaadayaan ciidanka cadawga.